Muuqaal: Sacuudiga oo dhibaato xoog leh ku bilowday Soomaalida dalkaas ku nool - Caasimada Online
Home Warar Muuqaal: Sacuudiga oo dhibaato xoog leh ku bilowday Soomaalida dalkaas ku nool
Muuqaal: Sacuudiga oo dhibaato xoog leh ku bilowday Soomaalida dalkaas ku nool
Muqdisho (Caasimadda Onlinr) – Dowladda Sacuudiga ayaa culeys weyn saartay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Sacuudiga.
Sacuudiga ayaa bilowday inay guud ahaan ajaanibta ku nool dalkaas kusoo rogto lacag laga qaadayo bil kasta, taasoo lagu sheegay inay tahay mid looga qaadayo daganaanshaha halkaas.
Haddaba arrintaan ayaa saameyn weyn ku yeelatay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkaas qoysaska ku heysto kana shaqeysto.
Dowladda ayaa amartay in qof kasta oo ajnabi ah oo ku nool Sacuudiga laga qaado lacag Dollar ahaan u dhaxeyso 25 ilaa 30 Dollar, oo laga rabo qofka weyn iyo midka yar.
Lacagtaas ayaa laga doonayaa inay dadka u bixiyaan qaab sanad ahaan, tusaale ahaan haddii aad Soomaali tahay isla markaasna aad tagan tahay dalka Sacuudiga oo aadna heysato 10 Caruur, qoyskaagana uu guud ahaan ka kooban yahay 12, waxaa qof kasta laga rabaa 30 Dollar, taasoo sanadkii noqoneyso lacag gaareyso ilaa 4,320 (Afar Kun Seddex Boqol iyo Labaatan Dollar).
Haddaba dadka Soomaalida ayaa bilaabay inay dacwadood dowladda usoo mariyaan baraha Bulshada, gaar ahaan Facebook, si wax looga qabto culeyska soo wajahay.
Halkaan hoose ka daawo aabe Soomaaliyeed oo ka hadlayo dhibaatada ku heysato dalka Sacuudiga.